Sacuudiga iyo JORDAN oo dacwad ERDOGAN ka dhan ah u gudbiyey YAHUUDDA - Caasimada Online
Home Dunida Sacuudiga iyo JORDAN oo dacwad ERDOGAN ka dhan ah u gudbiyey YAHUUDDA
Sacuudiga iyo JORDAN oo dacwad ERDOGAN ka dhan ah u gudbiyey YAHUUDDA
Qudus (Caasimada Online) – Sacuudiga, Jordan iyo maamulka Falastiiniyiinta ayaa uga digay Israel in saameynta Turkiga ee Bariga Qudus ay sii ballaaraneyso, sida uu shaaciyey waregyska Haaretz ee Israel.
Ilo-wareedyo Israeli ah ayaa sheegay inay ka warhayaan ballaarashada Turkiga, islamarkaana ay isha ku hayeen in ka badan sanad.
Warbixinta ayaa sheegtay in saraakiisha Jordan ay ka carroodeen jawaabta Israel ay arrintan ka bixineyso oo ah mid soo daahday, sababtuna ay tahay in Israel ay ilaalineyso heshiis ay Turkiga la galeen 2016-kii.
Maamulka Falastiiniyiinta ayaa sheegay in gargaarka Turkiga uu ka wado Qudus, oo ay ka dambeeyaan kooxo islaamiyiin ah oo ku xiran xisbiga Erdogan ee AKP, uu yahay qorshe lagu qabsanayo Qudus.
“Turkish-ka ayaa hadda isku dayaya inay guryo ka iibsadaan Qudus, si awooddooda halkaas ay u baalaarato” ayuu yiri sarkaal ka tirsan booliska Israel.